प्रचण्ड-नेपाल समूहबाट बाहिरिए यी ६ नेता , जम्बो टोलीनै ओली समूहमा प्रवेश ! - Prahar News
प्रचण्ड-नेपाल समूहबाट बाहिरिए यी ६ नेता , जम्बो टोलीनै ओली समूहमा प्रवेश !
काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई आफनो समूहमा ल्याउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।
काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले गृहमन्त्री थापालाई आफ्नो समूहमा ल्याउन नसके पनि उनीनिकट रहेका बहुसंख्यक सदस्यलाई आफ्नो समूहमा ल्याउन सफल भएको जनाएका छन्।
केही गरी पनि बादलजीलाई ल्याउन सकेनौं तर उहाँनिकट बहुमत सदस्य भने ल्याउन सफल भएका छौं, प्रचण्डले सम्बोधनको क्रममा भने। उनका अनुसार बादल आफ्नो समूहमा नआए पनि उनीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य र बहुमत केन्द्रीय समिति सदस्य भने आफ्नो पक्षमा उभिएको जनाएका छन्।
तर गृहमन्त्री थापानिकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार थापा नखुलेकाले प्रचण्डलाई साथ दिए पनि पछिल्लो समय ओलीतिर खुलेर लागेपछि केही सदस्य पनि उनीसँगै जाने छन् । को-को ओली समूहमा जानेछन्, त्यो केही दिनमा नै खुल्नेछ, उनले भने ।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ
नेकपाका नेता घनश्याम भुसालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने बताएका छन् । भुसालले सर्वोच्च अदालतले जनमत र संवैधानिक व्यवस्थाकै पक्षमा फैसला गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रचण्ड–माधव समूहले रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजना गरेको आफू पक्षीय जिल्ला कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता भुसालले संसद पुनर्स्थापना भए नेकपा पार्टी विभाजन रोकिने दाबी गरे ।
नेता भुसालले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय संविधान, परम्परा र जनचाहनाविपरीत भएकाले पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको दोहोर्‍याए । अहिले केपी ओली समूहमा लागेका व्यक्तिहरू पनि उनले गरेको कामलाई समर्थन गरेर नभई व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण समूहमा लागेको उनको आरोप छ ।
भुसालले विभिन्न मुलुकमा भएका अभ्यासलाई हेर्दा पनि जनताको चाहनाविपरीत गरिएका संसद विघटनलाई अदालतले बदर गरिदिएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिने बताए।
संसद विघटनको निर्णयले नेपाली जनताले ५ दशकदेखि चाहेको समृद्धिको सपना तुहाएको समेत उनले बताए । भुसालले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नभएमा मुलुक अधोगतितिर जाने बताए ।
आफूविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले त्यसलाई सुविधाजनक बहुमतका साथ सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आफू सहज अवस्थामै त्यो प्रस्तावलाई सदनमा ‘फेस’ गर्न तयार रहेको बताएका छन् । निजी सचिवालयमार्फत आइतबारै भिडियो सन्देश जारी गर्दै राईले “सुनियोजित, बनिबनाऊ र खास ठाउँबाट निर्देशित भएरै प्रदेशहरुलाई कमजोर बनाउने, अस्थिरता ल्याउने, कमजोर बनाउने र संघीयतालाई
संस्थागत हुन नदिन निर्देशित ढंगबाट अविश्वास प्रस्ताव आएको” बताएका छन् । तर, यसबाट आफू रत्तिभर पनि विचलित नभएको राईले बताएका छन् ।
उनले संघीयतालाई ‘कोल्याप्स’ गर्ने चालबाजीका रुपमा अविश्वास प्रस्ताव आएको भन्दै त्यसलाई असफल बनाउने जिकिर गरेका हुन् । उनले भने, “यसको सामना म आरामले गर्छु, किन आरामले गर्छुभन्दा विवेक भएका माननीय सदस्यहरु प्रदेशसभामा हुनुहुन्छ ।
राईले आफूविरुद्ध आएको प्रस्ताव बनिबनाऊ, निर्देशित, सुनियोजित, चालबाजी र गोटी हो भनेर प्रदेशसभाका सदस्यले बुझेको दाबी गरे । संविधानलाई कार्यन्वयन हुन नदिन अनेक प्रयास हुँदै आएको बेला जनतालाई अपिल गरेर ठूलो जनमत प्राप्त गरेको राईको भनाइ छ ।
आइतवार, पौष १२ २०७७०६:०८:३३